Antonio Conte oo ka warbixiyay sababta uu isaga diiday dalab ay u soo bandhigtay kooxda Real Madrid – Gool FM
Antonio Conte oo ka warbixiyay sababta uu isaga diiday dalab ay u soo bandhigtay kooxda Real Madrid
(Yurub) 31 Jan 2019. Macalinkii hore kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa ka warbixiyay sababta uu isaga diiday shaqada tababarka Real Madrid, kadib markii Julen Lopetegui la ceyriyay bartamihii xilli ciyaareedkan.
49 jirkan ayaa tilmaamay inuu jiray wadahadal uu la galay kooxda Real Madrid, laakiin ugu dambeyntii uu iska diidey sababa la xiriira inuusan jecleysan inuu hogaamiyo koox bartamaha xilli ciyaareedkan.
“Waxaa jiray suurtogalnimo ah in aan tababare u noqdo Real Madrid, lakiin ma jecli inaan hogaamiyo koox bartamaha xili ciyaareedka, sidaasi darteed wadahadaladu ma dhameystirmin”.
Intaas kadib Antonio Conte ayaa wuxuu ka hadlay wararka ku aadan inuu ku dhow yahay leylinta kooxda Inter Milan wuxuuna yiri:
“Waxaa haatan ku suganahay magaalada Milan, sababtoo ah waxaan kaga imid magaalada London si aan u daawado kulanka Juventus iyo Atlanta”.
“Laakiin uma joogi halkan kooxda Inter Milan mana aanan helin wax dalab ah oo ka yimid koox talyaani ah”
DEG DEG: Manchester United oo heshiis Cusub ka saxiixatay Anthony Martial...(Imise ayuu Mushaar ahaan u qaadanayaa?)
SAWIRRO: Saxiixa Cusub ee Arsenal oo durba Tababarka bilaabay laakiin........